सुपरहिरो विमल - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
साफ फुटबल च्याम्पियनसिपका क्रममा पाकिस्तानविरुद्धको गर या मरको खेलमा इन्ज्युरी समयमा गोल गरेर १५ वर्षे ठिटो विमल घर्ती मगर एकाएक स्टार बनेका थिए । विमलको उक्त गोल उनको जीवनकै महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ पनि सावित भयो । त्यो खुसीले विमल आल्हादित हुनु स्वभाविक थियो, किनभने उनको त्यो एउटा गोलले राष्ट्रको शान उचो गरेको थियो । पाकिस्तानसँग लगभग हार तय भैसकेको अवस्थामा अतिरिक्त समयमा विमलले गरेको त्यो गोलले खेललाई बराबरीमा ल्याएपछि नेपाल सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्न सफल भएको थियो । विमलले गोल गरेपछि सम्पूर्ण नेपालीले उनलाई मनैबाट धन्यवाद टक्र्याए र उनी सेलिब्रेसनको नायक बने ।
अन्डर सिक्सटिन साफ च्याम्पियनसिप खेल्दा बंगलादेशका कोच विमलको खेलबाट प्रभावित भए । ती डच प्रशिक्षकले प्रतिद्वन्द्वी टिम नेपालका स्ट्राइकरलाई हल्यान्ड लगेर ट्ेरनिङ गराउने प्रस्ताव राखे । हल्यान्डमा २ साताका लागि एउटा तालिममा पठाउने बंगलादेशी कोचको त्यो निर्णयलाई पनि विमलले सार्थक तुल्याए । त्यहाँका उत्कृष्ट क्लबहरूबीचको अन्डरनाइन्टिन उमेर समूहको खेलमा उनले ४ गोल गरे । त्यही खेलका क्रममा उनी बेल्जियमको एक फुटबल एजेन्टको नजरमा पर्न सफल भए । ‘राम्रो खेलाडीको खोजीमा भौंतारिरहेका एजेन्टले मेरो खेल देखेर तालिमका लागि बेल्जियम लाने प्रस्ताव राखे,’ विमलले भने– ‘तिनै एजेन्टमार्फत मैले बेल्जियमको फस्र्ट डिभिजन क्लब एन्डरलेचमा तालिम गर्न पाए ।’ एन्डरलेचको एकेडेमीमा दुई महिना तालिम लिएपछि उनले केहि ख्यातिप्राप्त क्लबको उमेर समूहसँग अभ्यास खेल खेल्ने मौका पाए । ‘मैले एसी मिलानसँग पनि खेलेँ, विमलले भने– ‘मेरो खेल जीवनको उत्कृष्ट क्षण थियो त्यो, जुनियर युरोपियन क्लबहरूसँग मैले अभ्यास खेलमा खेल्ने मौका पाएको थिएँ ।’ त्यसपछि अन्तराष्ट्रिय रूपमै ख्याति कमाएका युरोपियन फुटबल क्लबसँग पनि खेल्न सकिने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास उनमा जाग्यो । हाल एन्डरलेचमै रहेका विमलले अभ्यास खेलका क्रममा इन्टरमिलान फेनेरबास, वेनफिका, एजेक्स जस्ता चर्चित क्लबसँग खेल्ने मौका पाएका छन् । अहिले नेपालमा रहेका विमल चाँडै बेल्जियम फर्कंदैछन् । ‘अब बल्ल वैधानिक रूपमै अनुबन्धित भएर अन्डरनाइन्टिन म्याच खेल्न पाउँछु,’ विमलले सुनाए–‘१८ वर्ष पूरा नभैसकेकाले अहिले करार गर्न सक्दिनँ । १८ वर्ष पूरा भएपछि क्लबहरूले लिने बताएका छन्, यति हो म त्यहाँको फस्र्ट डिभिजन क्लबमै अनुबन्धित हुनेछु ।’ हाल एन्डरलेचसँगको करार केही बाँकी पनि भएकाले केहि समय तालिम गरेर उनी क्लब फुटबलमा प्रवेश गर्नेछन् । एन्डरलेजका प्रशिक्षक मोहम्मद ओवाबीले यसअघि नै विमलको बायाँ खुट्टा अचम्मको भएको बताइसकेका छन् । उनलाई अझै प्रशिक्षण दिन आवश्यक भएको बताउँदै प्रशिक्षक ओबाबीले उनको बायाँ खुट्टाको अविश्वसनिय क्षमतालाई कसरी सही प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता मात्र भएको एन्डरलेचको बेबसाइटमा उल्लेख छ । विमलले बायाँ खुट्टाले कुशल तरिकाले गोल गर्न सक्ने भएकाले उनको सम्भावना राम्रो देखिएको ती प्रशिक्षकको भनाइ छ । भविष्यमा युरोपियन क्लबमै करिअर बनाउने सपना साँचेका विमल नेपाली राष्ट्रिय टिमको सदस्य भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर खेलिने सबै खेलमा सहभागिता जनाउने बताउँछन् । उनले आफू अनुबन्ध भैसकेपछि आमा र बहिनीलाई पनि युरोप लाने बताए ।
‘सुरुवातका दुई साता मलाई पनि निक्कै गाह्रो भएको थियो, मेसो नै पाउन सकिरहेको थिइनँ,’ विमलले सुनाए– ‘बिस्तारै त्यहाँको फुटबल टेक्निक बुझेपछि खेल्न सजिलो भयो ।’ विमल बेल्जियममा हुँदा नै नेपालको अन्डर नाइन्टिन क्लबले उनकै पहलमा त्यहाँ गएर १० दिन तालिम गरेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रशिक्षक, अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय फुटबल टिम
एउटा प्रशिक्षकको दृष्टिकोणमा विमलमा कस्तो खेल प्रतिभा पाउनुभएको छ ?
विमल गडगिफ्टेड स्किलफुल प्लेयर हुन् । उत्कृष्ट खेलाडि भएकैले उनले आज यो स्थान बनाएका हुन् । उनी क्षमतावान् खेलाडी हुन् तर हामीले उनलाई ‘पोलिस’ गर्न अझ बाँकी नै छ । अन्डर फोर्टिनदेखि अन्डर नाइन्टिनसम्म मैले उनलाई प्रशिक्षण दिएको छु । राष्ट्रिय टिमको पनि महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उनीबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौं । उनले मेहनत गर्दै गए भने नेपाली फुटबलको ‘सान’ बन्न सक्छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय टिमले पनि उपलब्धि हासिल गर्नसक्छ । यो कुरा विमलले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ विमललाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?
अन्डर नाइन्टिन समूहको टिम क्याप्टेन हुन्— विमल, तर उमेर नै किशोरवयको उत्तराद्र्धको भएकाले हुन सक्छ, केही चन्चले छन्, केटाकेटीपन छ, अझै परिपक्व हुन सकेका छैनन्, जबकि उनी राष्ट्रिय टिमको पनि महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् । मलाई लाग्छ, विमलले सानो उमेरमै आवश्यकताभन्दा बढी लोकप्रियता पाए, यसले कतै उनको खेललाई असर गर्ने त होइन जस्तो पनि लाग्छ । यसका लागि विमल आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ । आफ्नो खेल क्षमतालाई निरन्तर रूपमा विकास गर्दै लानुपर्छ । पाएको लोकप्रियतालाई खस्किन नदिन आमनागरिकको अपेक्षा अनुरूपको खेल देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अझै कडा मेहनत गर्नुपर्छ ।
विमलको लोकप्रियताले गर्दा उनको खेल जीवनमा केही समस्या भएको छ ?
मैदानमा त मैले त्यस्तो अनुभूति गर्नुपरेको छैन, क्याप्टेनका रूपमा उनले आफूले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बुझ्नु आवश्यक छ । उनी राम्रो खेलाडि हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा पछि पर्छन् कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । उनले मेहनत गरे भने त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छन् । पछिल्लो समयमा उनमा ‘स्टारडम’को भावना विकास भएको सुनेको छु । कसैलाई नगन्ने, वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने सुन्छु, त्यसलाई उनले त्याग्नुपर्छ । अब परिपक्व बन्नुपर्छ ।
प्राविधिक हिसाबले विमलका सबल पक्ष के हुन् ?
रनिङ विथ बलमा विमललाई कसैले भेट्न सक्दैनन् । गोल स्कोरिङ गर्ने, बलको पोजिसन मिलाउने, ट्याकल गर्ने, स्विचिङ गर्ने अद्भुत क्षमता छ उनमा । उनले कुनै पनि समयमा गोल गर्न सक्छन् । बल पाइसकेपछि त्यसलाई सही दिशा प्रदान गर्ने क्षमता उनमा छ । खेलाडीका हिसाबले उनी धेरै राम्रो स्थानमा छन् ।
बेल्जियमको प्रशिक्षणले विमलको खेलस्तरलाई कत्तिको सुधारेको छ ?
बेल्जियम जान पाउनु बिमलको सौभाग्य हो । उनले फस्ट डिभिजनको क्लबबबाट युरोपियन खेलाडीसँग खेल्न पाएका छन् । तुलनात्मक रूपमा दक्ष युरोपियन प्रशिक्षकबाट तालिम पाएका छन् । त्यहाँको तालिमले उनको खेल अझ राम्रो भएको छ । राम्रो युरोपियन क्लबले उनलाई अनुबन्ध गरेर खेलाउने सम्भावना पनि छ । नेपाली फुटबलर युरोपमा गएर खेल्नु नेपाली टिमका लागि पनि गर्वको कुरा हो । उनले भोलि देशका लागि पनि राम्रो खेल्न सक्छन् ।
सिनियर फिफा रेफ्री
विमल कस्ता खेलाडी हुन् ?
उनी खेलाडी र म प्रशिक्षक भएकाले हामी एउटै मैदानमा अभ्यास गरिरहेका हुन्छौं । जहाँ म विमलको खेल क्षमतालाई नजिकबाट बुझ्न पाउँछु । विमल राम्रा खेलाडी हुन् । फुटबलको क्षेत्रबाट नेपालको नाम अझ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमतावान् खेलाडी हुन्— विमल । तालिमका क्रममा उनमा केही विशेषता पाउँछु, जुन एउटा खेलाडीका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । ठूलालाई आदर गर्ने, साथीभाइसँग मिलनसार रहने उनको स्वभावले मलाई प्रभावित तुल्याएको छ ।
फिफा रेफ्री भएको हिसाबले उनको खेलशैलीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
रेफ्रीको हिसाबले मैले मैदानमा त विमललाई धेरै म्याच खेलाउन पाएको छैन्, तर उनले खेलेका म्याचहरू हेरेको छु । अनुशासित नै देख्छु । खराब एटिच्युड पाएको छैन । अहिले उनी सुदुरपश्चिमाञ्चल क्लबमा आबद्ध भएका छन्, अब मैले उनलाई म्याच खेलाउन पाउँछु । आशा गर्छु, उनले उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्दा अनुशासनलाई पनि ख्याल गर्नेछन् ।
खेलाडीका रूपमा विमलको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाली राष्ट्रिय टिमको खेल क्षमता राम्रो हुँदाहँुदै पनि सधैं स्ट्राइकरको कमी महसुस हुन्छ । गोल गर्ने स्ट्राइकरको खडेरीलाई विमलको उपस्थितिले परिपूर्ति गर्छ भन्ने लाग्छ । विमलको भविष्य एकदमै राम्रो छ । उनले युरोपियन क्लबमा तालिम लिन पाएका छन्, त्यहाँको राम्रो क्लबबाट खेल्ने मौका पाए भने उनको खेल जीवन अझ उज्ज्वल हुन्छ ।
राम्रो खेलाडी अनुशासित हुन कत्तिको आवश्यक छ ?
हरेक पेसा र क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र जीवनमा मानिस अनुशासित हुन आवश्यक छ । खेलाडी त अझ बढी अनुशासित हुनुपर्छ । राम्रा भनिएका खेलाडी अनुशासित नहुँदा उनीहरूको खेल जीवन बिग्रिएका उदाहरण विश्वभर छन् । यो कुरालाई विमलले ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी हो भन्ने बुझेर उनले आफ्नो खेल जीवनलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।
विमलका विशेषता के–के हुन् ?
तीव्र गतिमा बल दौडाउने तरिका, स्किलफुल खेल प्रस्तुत गर्ने क्षमता उनका मुख्य विशेषता हुन् । गोल स्कोर गर्ने क्षमता पनि अरूभन्दा विशिष्ट छ । वान स्टेप सट पनि राम्रो छ । पावरफुल सट हान्न सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा उनको शारीरिक उचाइ राम्रो छ, हाइट बेनेफिटका कारण उनले स्ट्राइकरका रूपमा राम्रो खेल्न सक्छन् । विमलले अझै मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने उनको उमेर धेरै भएको छैन, त्यसो भएको खण्डमा उनी एसियाली रिजनकै उत्कृष्ट खेलाडी बन्न सक्छन् ।
शिव सुवेदी, स्ट्राइकर
अन्डरनाइन्टिन राष्ट्रिय फुटबल टिम
मित्रताका हिसाबले विमल तपाईंलाई कस्ता लाग्छन् ?
हामी अन्डर टुबेलदेखिका साथी हौं । त्यसयता एन्फा एकेडेमीको होस्टलमा एउटै कोठामा बस्दै आएका छौं । थुप्रै वर्ष सँगै बस्दा हाम्रो मित्रता अझ प्रगाढ भएको छ । अहिले हामी असाध्यै मिल्ने साथी हौं । उनको खेल कौशल त अब्बल छ नै, साथीभाइसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै प्रिय छ । सहयोगी र मिलनसार स्वभावले गर्दा सबै साथीभाइसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ । विमलमा आफूभन्दा सानालाई माया–स्नेह गर्ने र ठूलालाई आदर–सम्मान गर्ने गुण छ ।
खेलाडीका रूपमा चाहिँ विमलको क्षमतालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?
विमल एकदमै राम्रा खेलाडी हुन् । सानो उमेरमै उनले आफ्नो खेल प्रतिभा प्रस्ट्याइसकेका छन् । म पनि स्ट्राइकर भएकाले उनको खेल क्षमतालाई नजिकबाट बुझ्न सक्छु । मैदानमा पाएको मौका सदुपयोग गर्नसक्ने खेलाडि हुन्— विमल । उनी फोकस्ड भएर मैदानमा उपस्थित हुन्छन् । समग्रमा उनको खेल शैली उत्कृष्ट छ ।
खेलाडीका रूपमा विमलले सुधार्नुपर्ने पक्ष केही देख्नुभएको छ ?
एउटा खेलाडीले अझ भनौं स्ट्राइकरले पाएको मौका सदुपयोग गर्ने देखिको अर्को विकल्प हुँदैन । विमलले मौका पाउँदा त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न सकून् भन्ने मेरो शुभेच्छा सधैं रहन्छ । त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
विमलको मन नपर्ने बानी ?
रिसाउँछन्, स–साना कुरामा पनि रिसाउने बानी सुधार्नुपर्छ । रिसाएका बेला उनी अक्सर कसैसँग बोल्दैनन् । अरू त त्यस्तो नराम्रो पक्ष केही देख्दिनँ ।
खेलाडीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विमलले आफ्नो छवि निर्माण गर्ने कत्तिको सम्भावना छ ?
कुनै पनि खेलाडीले मेहनत गर्‍यो र उसले राम्रो सुविधा पायो भने धेरै राम्रो गर्न सक्छ । विमलमा यो सम्भावना प्रचुर देख्छु म । हामी दुई फुटबलका बारेमा धेरै कुरा गर्छौ, विमलले धेरै कुरा बुझेका छन् । बेल्जियमको तालिमले पनि उनलाई थप सबल बनाएको छ । कुनै दिन विमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लबको राम्रो खेलाडीका रूपमा चिनिन सक्छन्, त्यसो भए अचम्म मान्नुपर्दैन । मेहनत र अवसर मुख्य कुरा हो ।
विमलमाथि धेरै बोझ